Xaqaaqa warbixin ahaanneed - Region Midtjylland
Du er her: Om os English Other languages somali Xaqaaqa warbixin ahaanneed
Xaqaaqa warbixin ahaanneed
Darriiqadda daaweyntu waxa ay ku dhisan ama salaysan tahay labbadda dhan oo kalsooniddoodda. Labbadda dhinac macnaheedu waa adigga oo ah bukaan socde iyo ehelkaaga iyo daaweeyaha oo ah mas´uuliyiinta ka socota Cisbitaalka.
Adigga oo ah bukaan socde xaq ayaad uleedahay inaad hesho warbixin ku saabsan marxalladdaadda caafimaaddeed iyo fursaddaha daaweyn ahaanneed haddii aad 15 sanno jirsatay.
Haddii aad ka yar tahay 15 sanno waxa ay arintu noqonaysaa in qofka isagga ah ee haya mas´uulka waalidnimo, yahay qofka warbixintaadda caafimaad la siinnayo/hellaya. Ilmaha caafimaadkiisa lagga hadlayanna ilaa iyo inta ay suurto gal tahay ee uu (ilmuhu) fahmi karrayo waa in lagga qeyb gelliyaa marxalladdiisa daaweyn ahaanneed.
Bukaan socde/xannuunsanne ahaan waxaa laggaa wargelinayaa:
Fursaddaha daaweyneed – fursaddaha banaan ama furan ee la helli karro
Qatar iyo raad ku reebitaan – kuwaas oo kalla noqon karra baaritaan ama daaweyn
Xilligga daaweyntu ay keenni karto qatar weyn oo leh raad ku reebbitaan iyo dhibbaatooyin waa in warbixintu ay noqotaa mid aad iyo aad uga tafa – tirran qalitaan yar oo caaddi ahaan qatar aan lahayn
Caaqibbooyin, haddii aadan adiggu daaweyn ka doonnaynin/uga baahnayn
Darriiqadda daaweyn iyo natiijadda daaweyneed
Bukaan socde ahaan waxa aad xaq uleeddahay in aadan codsannin warbixinadda ku saabsan xaalladdaadda caafimaaddeed iyo fursaddaha daaweyneed. Iyo wellibba qatarta dhibbaatooyin iyo raad ku reebbitaanba.
Haddii aadan adiggu doonnaynin in aad oggaatid natiijadda baaritaan daaweyn shaqaaluhu waa ay tixgellinnayaan codsiggaaaga.